Wax garadka Warsheekh oo Dowladda Federaalka iyo maamulka Hirshabeelle ka codsaday in wax laga qabto baahiyaha ka jira Degmada+Sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Warsheekh-(SONNA)-Maamulka Degmada Warsheekh ee Gobolka Shabeellada dhexe ayaa kulan looga hadlayay baahiyaha guud ee ka jira Degmada iyo sidii wax looga qabn lahaa la qaatay wax garadka iyo Bulshada halkaasi ku dhaqan.
Kulanka oo ay ka qeyb galeen maamulka Degmada, Odayaasha dhaqanka, Haweenka iyo Bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa waxaa looga dooday sidii xal looga gaari lahaa dhibaatooyinka kala duwan ee jira Degmada.
Xersi Maxamed Nageey, oo ka mid ah wax garadka Degmada Warsheekh ayaa sheegay in ay u baahan yihiin in laga taageero soo celinta adeegyada Bulshada,sida caafimaadka,wax barashada amniga iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha.
Wuxuu sidoo kale Dowladda federaalka Soomaalia iyo maamul Goboleedka Hirshabeelle ka codsady in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ka jira Degmada Warsheekh.
Odayaasha, Haweenka iyo wax garadka ka qeyb galay kulanka ayaa Dowladda dhexe maamulka Hirshabeelle ka codsaday in dib u dhis ay ku sameeyaan Waddada isku xirta Muqdisho iyo Degmada Warsheekh, si ay u yaraato caqabadaha ay kala kulmaan Bacaadka faraha badan ee xiray halkaasi.
Binti Cali Maxamuud, oo ka mid ah Umulisooyinka Degmada Warsheekh ayaa sheegtay in ay jiraan dhibaatooyin xagga caafimaadka ah oo ay la kulmaan Haweenka, gaar ahaan xilliga dhalmada, waxanay xustay in ay qaarkood u dhintaan Dhiig bax, waxanay Dowladda dhexe iyo maamulka Hirshabeelle ka codsatay in ay baaqooda ka jawaabaan.